Fiaraha-miasa sy fifanarahan'ny sehatra tsy miankina sy ny fanjakana
Sao dia mpidoroka zava-mahadomelina? Toy ny ahoana ny lasany? Raha tsy tena fantatro ilay lazainao ho andefimandrinao, aza mbola manambady aloha.
Tsy hainao rehefa ao aoriana ao ka hiseho aminao ny tena toetrany ka hahita olana ianao. Ary toetra no tena vadiana fa tsy endrika ivelany. Fitenintsika Malagasy ny hoe « ny tokantrano fihafiana ». Diso ilay fandraisantsika azy ankehitriny satria tsy hoe fihafiana ny vono sy ny fampijaliana akory.
Na efa hanapitra ny aina ary ve dia mbola hihafiana ihany ohatra? Tsia kosa angamba! Izay hahasambatra ara-batana sy ara-tsaina anao aloha no jereo! Tsy dia ifanomezan-tsiny ihany aloha satria isika dia nobehazina anaty fiarahamonina tia mitsara ivelany. Eny, tia mitsara ivelany ny Malagasy, aoka tsy hifampihatsaravelatsihy!
Inona aky no idirako? Io ry tovovavy no tokony ho ataonao ao an-dohanao. Izay hahasambatra anao no ataovy. Aza adino koa, fa na mety na tsy mety ny fanambadianao, ny olona tsy maintsy mahita izay ambarany foana. Ny Malagasy rehefa mba miresaka fisaraham-panambadiana dia ny hoe : « tsinjovy ny ankizy ».
Ny tiany hambara dia : « aza misaraka fa sao dia hanimba ny ankizy ». Diso nefa izany! Tsinjovy tokoa ny ankizy ary mijere lavitra. Ry tovovavy, ho sambatra ve ireo zanakao ireo anaty tokantrano mikorontana? Sary hiraikitra ao an-dohany mandritra ny taona maro izany. Hanao ahoana izy rehefa lehibe? Mahazaiza mijery lavitra ry tovovavy. Toa ratsy endrika izany vehivavy irery izany indrindra moa rehefa « mandroso taona ».
Hany ka dia lasa manambady tsy fidiny ny betsaka. Fiainanao io, ianao ihany no mahalala izay mahamety azy. Aleo irery toa izay manambady olona tsy fantatra toetra, na manafin-toetra, mety hampijaly anao. Ny fainana efa sarotra rahateo. Io dia lesoka mpahazo ny tovovavy maro ankehitriny. Tamin-d Radama II dia nasiana fanitsiana indroa ny fanisan' andro malagasy merina satria dia nihoatra andro mahery. Raha izany dia tsy fantatra intsony na nateraka Alahamady marina Andrianampoinimerina sy ny hafa na tsia. Tamin-d Ranavalona III , vokatr' izany rehetra izany, dia tsy fantatra intsony ny tena andro vava Alahamady amin' ny volana Alahamady satria samy manana ny fanisany andro ny mpanandro.
Hany herin-dRanavalona III, novainy amin' ny 22 Novambra andro nahaterahany ny fiandohan-taona, sahala amin' ny nataon' ireo mpanjaka teo aloha izay nanao ny andro nahaterahany ho fiandohan-taona.
Saingy ny azy daty gregôriana fa tsy datim-panandroana. Tamin' ny taonjato faha kosa rehefa nivelatra ny fivavahana kristiana ary lasa Kristiana mihitsy ny fanjakana malagasy dia tsy nampiasaina intsony ilay anarana hoe "Alahamadibe" satria toa misy fombafomba fanao amin' ny sampy izany, koa " Fandroana " no teny nentina niantsoana io fety io. Tamin-dRanavalona III dia novainy ho ny 22 Novambra, izay tsingerin-taona nahaterahany ny fanaovana ny fandroana, vanimpotoan' ny asara fizaran-taona mafana sy be orana moa io 22 Novambra io koa "Asaramanitra" no niantsoana io fety io.
Ary "Tratry ny Asaramanitra e! Marihina fa avy amin' ny teny sanskrity izany anarana izany. Rehefa tonga ny fanjanahantany ka mandrak' ankehitrio dia nampiasaina hilazana izay fety rehetra ny teny hoe asaramanitra na dia tsy vanimpotoan' ny asara intsony aza ka na tonga ny 1 Janoary na 14 Jolay na 26 Jiona dia mifampiarahaba "tratry ny asaramanitra" ny Malagasy.
Nony lasa zanatany i Madagasikara dia io fety io ny Alahamadibe , izay maneho ny fihavanana sy ny firaisan-kinan' ny ambanilanitra, no noravan' ny Vazaha voalohany. Hita taratra tamin' izany tokoa mantsy fa tena fiaraha-monina nirindra ao anatina rafitra milamina sy mafonja no niainan' ny Malagasy, araka ny fomba fijerin' ireo Malagasy nahazo tombontsoa tamin' izany.
Ka raha nikendry ny hanjanaka ny Vazaha dia io rafi-piaraha-monina io no noravany voalohany. Avy hatrany dia napetrany fa ny 1 Janoary amin' ny fanisan' andro gregôriana no taom-baovao. Tamin' ny taona dia nofoanan' i Frantsa mpanjanatany ny fankalazan' ny Malagasy ny Alahamadibe ary nenjehin' i Frantsa ny Malagasy nankalaza izany.
Vokatr' izany, tsy sahy nankalaza izany imasom-bahoaka intsony ny Malagasy. Maro tamin' ireo Malagasy voasokajy ho andevo na mpanompo no tsy nahatsiaro fahavoazana loatra tamin' ny nanafoanana izany. Fara-fahavitsiny dia misy "tsinana Alahamady" roa karazana ny eto Madagasikara noho ny fisian' ny karazana tetiandro roa samy mampiasa anaram-bolana amin' ny teny arabo. Amin' ireo mpanaraka ny tetiandro malagasy manara-bolana sy masoandro dia amin' ny Marsa na Avrily no anombohan' ny volana Alahamady, izany hoe amin' ny fizaran-taona fararano.
Isan' ny antony tokony hankalazan' ny Malagasy rehetra ny taom-baobao fararano izany, araka ny hevitr' izy ireo. Ny Trano Koltoraly Malagasy sy ny mpikambana sasany ao amin' ny Akademia Malagasy no voalaza fa namaritra io daty io araka ny fikarohana nataon' izy ireo. Tamin' ny taona dia ny 21 Marsa no nakalazana ny taom-baovao malagasy . Tamin' ny taona dia ny 3 Avrily no nanatanterahana izany . Ny datin' ny taom-baovao tamin' ny taona dia na 12 Marsa ho an' ny Trano Koltoraly Malagasy na 16 Marsa ho an' ny Mamelomaso. Tamin' ny taona dia tamin' ny 31 Marsa .
Nankalazaina tamin' ny 20 sy 21 Marsa izany tamin' ny taona . Tamin' ny taona dia ny 20 Marsa  alina no tsinana ny volana Alahamady, ary ny 21 Marsa no miandoha ny taona malagasy Ny 20 sy 21 Marsa araka izany no nankalazany amin' ny fomba manetriketrika ny taom-baovao malagasy Ny 10 Marsa no nanaovana ny fankalazana tamin' ny taona  . Nankalazaina tamin' ny 28 Marsa  ny taom-baovao malagasy Tamin' ny taona dia tamin' ny 18 Marsa no nankalazana ny taom-baovao fararano  . Tamin' ny taona dia ny 6 Avrily no nankalazana ny taom-baovao malagasin' ireo ao amin' ny Trano Koltoraly Malagasy.
Ny tetiandro ampiasain' ireo mpankalaza taom-baovao fararano dia tokony tsy manara-bolana tanteraka fa manara-bolana sy masoandro. Midika izany fa amin' izy ireo dia nanana fomba namantarany ny ekinoksa m-pararano 21 Marsa , na zavatra hafa mitovy amin' izany, ny Ntaolo , na dia tsy fiteny tamin' izany fotoana izany aza ny hoe ekinoksa frantsay: equinoxe. Lazaina fa ny Trano Koltoraly Malagasy sy ny mpikambana sasany ao amin' ny Akademia Malagasy dia samy nikaroka momba izany ary nitovy ny fomba fijerin' izy ireo fa raha ampifandrifiana amin' ny fanisan-taona gregôriana dia ny tsinambolana akaiky indrindra ny ekinoksa 21 Martsa no fiandohan' ny taona malagasy ka ankalazana ny taom-baovao malagasy.
Toherin' ny mpanaraka ny tetiandro manara-bolana sady mankalaza Alahamadibe, tsy amin' ny daty na volana gregôriana raikitra, ny fomba famaritan' ireo mpankalaza taom-baovao fararano satria amin' izy ireo dia manara-bolana tanteraka ny tetiandro malagasy. Fahizay, hoy izy ireo, dia manisa andro sy mijery ny endrika sy ny toeran' ny volana mitaha amin'ny antokon-kintana ny mpanandro mba hahalalana ny volana tsinana sy ny diavolana sy ny maizimbolana ary ny anaram-bolana.
Ambatovy | Fampahatsiahivan-tsaina momba ny VIH/SIDA
Ankehitrio kosa, noho ny fisian' ny milina matanjaka dia azo fantarina mialoha ny andro mahatsinana ny volana Alahamady, araka ny eritreritr' ireo mpankalaza taom-baovao fararano, satria ireo solosaina matanjaka dia afaka mikajy izany ho an' ny 50 taona hoavy. Araka ny fahalalan' ireo mpitarika ny fankalazana taom-baovao fararano, tamin' ny taratasim-panjakana nifanaovan' ny mpitondra fanjakana teto Madagasikara tamin' ny nanjakan-d Ranavalona III , taratasy izay voarakitra ao amin' ny tahirim-bakokam-pirenena, dia hita fa mifanandrify amin' ny volana Marsa na Avrily eo hatrany ny volana Alahamady hoan' ny taona sy sy ary Hoan' ny Trano Koltoraly Malagasy dia eo amin' ny vanimpotoan' ny faranano , izany hoe, hoy izy ireo, efa lasa ny rivodoza, ny ranobe, ny fihotsahan' ny tany, izany fotoana izany.
Miakatra ny vary, ka resy ny maintso ahitra. Fahizay dia indroa miakatra ny vary isan-taona ka ny "vary aloha" dia eo amin' ny Febroary no miakatra, fa ny fotoana fiakaran' ny vary hafa kosa dia eo amin'ny fararano izay mifanandrify amin' ny volana Marsa-Avrily amin' ny taona gregôriana.
Efa afaka mifaly sy tsy mifehy kibo intsony ny rehetra ary efa nindaosin' ny ranobe sy ny rivodoza ny loto ary manomboka madio indray ny voajanahary rehetra. Ny Malagasy dia manararaotra an' io hidio amin' ny alalan' ny fandroana sy fifamelana ary fandiovana ny tontolo manodidina.
Fotoana filanonana ara-boajanahary, hoy izy ireo, ny fararano, satria tafavoaka ny andro ratsy sy ny mosary. Entin' izy ireo manamarina ny fankalazana koa ny fiteny fahizay, toy ny hoe "Mandihiza rahitsikitsika, hianaranay raha fararano". Misy amin' ny mpankalaza taom-baovao fararano ny milaza fa amin' ny vava Alahamady no mifanitsy ny tsinam-bolana sy ny antokon-kitanan' Alahamady eny amin' ny lanitra raha jerena avy eto Madagasikara . Misy aza ny milaza fa mifanitsy amin' ireo koa ny masoandro.
Ny tsinam-bolana akaiky indrindra ny ekinoksa 21 Martsa no tena mora amantarana ny andro voalohany amin' ny taom-baovao malagasy, hoy ireo mpanao ny fankalazana amin' ny fararano. Izany fiheverana izany dia tsy mifanaraka amin' ny zava-misy marina ara- kaikintana satria tsy amin' io fotoana io no idiran' ny masoandro na ao amin' ny fari-danitry ny antokon-kintan' ny Alahamady latina : Aries ; frantsay : Belier.
Ny daty maha ao amin' ny fari-danitry ny antokon-kintana Alahamady dia eo anelanelan'ny 18 Avrily sy 13 Mey. Araka ny hevitr' ireo mafana fo amin' ny fankalazana, ny taom-baovao malagasy dia tsy misy fomba iraisana hankalazana azy fa dia miankina tanteraka amin'ny mpikarakara ny fankalazana azy: ny Kristiana dia afaka mankalaza izany amin' ny fomba kristiana, ny Silamo malagasy koa dia afaka mankalaza ny taom-baovao malagasy amin' ny fomba silamo; toy izany koa ireo mpandala ny nentim-paharazana. Ny mpandraharaha amin' ny sehatra maro dia afaka mankalaza izany koa amin' ny fombany toy ny hetsika ao amin' ny toeram-piasana na toeram-pianarana.
Ny taranak' andriana dia afaka mankalaza izany amin' ny fombany. Ary any amin' ny faritra maro eran' i Madagasikara dia azo ankalazaina amin' ny fomba any amin' ny faritra ny taom-baovao malagasy. Izany filazana fahalalahana izany dia misy fetrany ihany raha jerena ny fihetseham-pon' ny mpankalaza taom-baovao fararano manoloana ireo Malagasy hafa mankalaza taom-baovao lohataona araka ny hita amin' ny tambazotran-tserasera sy tranonkala ampiasainy. Mba hahatonga ny fankalazana ny taom-baovao fararano hahazo olona maro dia milaza ireo mpomba azy fa malalaka ny fomba fanatanterahana izany araka ny toerana misy ny mpikarakara satria ny rehetra dia afaka mankalaza azy amin' ny fomba mety aminy.
Rehefa tonga ny taom-baovao malagasy dia azo atao tsara ny mankalaza izany amin' ny fomba misy ao amin' ny faritra mankalaza izany. Na dia izany aza dia tsy vitsy amin' ireo Malagasy ny tsy mamerina ny fomba fankalazana Alahamadibe izay heveriny fa mifanohitra amin' ny toetrandro. Tsy misy araka izany ny lapabe sy ny kimandrimandry izay lazain' ny mpahay tantara fa nisehoana fahalalahan' ny firaisana ara-nofo. Misy, ohatra, omby tsy tokony ho vonoina noho ny volony. Mankalaza ny taom-baovao malagasy fararano ny eto Antananarivo sy eny Ikianja Ambohimangakely , ny ao Imerimanjaka , ny ao Ambohidrabiby , ny ao Ambohimanga , ny ao Sabotsy Namehana ary ny ao Ilafy.
Misy koa ny Kristiana sy nankalaza ny taom-baovao malagasy fararano. Ny Fiangonana FJKM Ambohidrabiby dia mankalaza izany amin' ny fomba kristiana ka fivavahana ekiomenika ao ampiangonana no ataony amin' izany ary ny mpiangona dia manao akanjo malagasy daholo amin' izany. Ao koa ny fikambanana pôlitika nankalaza azy toy ny antoko KITANA tarihin' i Tabera izay tsy nankalaza izany intsony taty aoriana.
Related firaisana ara-nofo aminny Madagaskar
Toeram-pilasiana feno hookup Tuliara Madagaskar
Tranonkala mampiaraka Madagaskar
Tranonkala mampiaraka aminny Madagaskar